Mangotraka ny ra an'ny mpiblaogy rehefa miparitaka ny tsy fahalalan'ny SEO | Martech Zone
Narotsak'i Christina Warren:
Aminay, ny karazana fanafihana SEO nambara tamin'ity herinandro ity dia dingana vitsivitsy monja amin'ireo ataon'ny bilaogera / tranokala an-taonina maro: manandrana minia milalao milina fikarohana fotsiny mba hahazoan'izy ireo hitsim-panahy bebe kokoa amin'ny tranokalany, ary amin'ny fanitarana, angamba manaova dolara fanampiny vitsivitsy. Raha tsy hoe manao lozisialy scam mahitsy ianao na tena tsara vintana - ny milina fikarohana ambony indrindra eto an-tany dia tsy hanana tombony maharitra raha tsy misy ny atiny.
Amboadia tezitra iray
Ny valiny feno dia nahazo valiny matanjaka avy tamin'i Michael Bilaogy SEO an'i Graywolf, izay milaza ara-bakiteny hoe adala tsy manan-tsaina i Christina. Somary matanjaka kely io karazan-teny io, tsy hanafika manokana an'i Christina aho, fa hilazako fa fanafihana manokana an'ireo olona toa ahy ny lahatsorany - izay miasa am-pitiavana sy mahira-tsaina ara-teknika ny bilaoginay mba hisarihana sy hitehirizana indrindra mpamaky.
Ny fahalalana ny teknolojia motera fikarohana sy ny fanatsarana ny tranokalanao dia tsy mitovy amin'ny fikarohana ny fifamoivoizana sy ny fitadiavana ny toerana tsara indrindra ho an'ny fivarotana zoronao. Nahazo vokatra tsara sy magazay tsara ianao, tsy fahendrena ve ny mametraka ny fivarotana amin'ny toerana tsara indrindra? Izany ve lalao raha tsy apetrakao eo afovoan'ny efitra ny fivarotanao izay tsy misy olona mahita azy?
Christina koa dia toa tsy mahalala ny fahaizan'i Google mamakafaka tsara sy mametraka ny rohy. Lazaina ny marina, azonao atao ny manao ny lalao rehetra tadiavinao, fa raha tsy misy olona manondro ny tranokalanao dia tsy ho eo amin'ny toerana lava be ianao. Ny laza no lakilen'ny tranonkala, ary ny bilaogera dia manampy amin'ny fitondrana ny lazan'ny tsirairay. Manao fikarohana an-jatony amin'ny Google isan'andro aho, ary mahalana no mahita pejy misy laharana ambony izay tsy manana ny vaovao tadiaviko.
Mitoraka bilaogy ve mpanararaotra? Izany mihitsy!
Raha tsy manararaotra ireo fotoana natolotry ny motera fikarohana ianao dia vendrana tsotra fotsiny. Tsy izaho lalao ny rafitra amin'ny fifantohana amin'ny firafitry ny pejiko, atiny, fisafidianana teny lakile, sns. Mametraka karipetra mena ho an'ny Google, Microsoft, ary Yahoo! hahita ahy mora foana ary handamina ny atiny araka ny tokony ho izy.
Google dia nanoratra ny fomba fahandro izay tokony harahin'ireo tranonkala tsara rehetra. Raha tsy afaka manaraka ny fomba fahandro ianao dia aza mimenomenona ahy fa ny sakafo hariva ataonao dia matsatso tsy mitaha amin'ny ahy. Mandehana mahandro sakafo, araho ny torolalana… ary mangataha fanampiana raha ilainao izany!
Tags: tsara indrindrafanatsarana ny mailakalisitry ny mailakafanatsarana ny lisitry ny mailakafliptoptantaran'ny dokam-barotraFatra CPSliderfaharanitan-tsaina ara-tsosialyfomba fanao tsara indrindra amin'ny media sosialytorohevitra ara-tsosialy
Dec 1, 2007 amin'ny 12: 44 AM
Doug: Ny heviny toy izao dia miverina amin'ny tranokalanao aho. Insightful sy mazava. Marina tanteraka ianao tamin'io fampitahana io tamin'ny fivarotana tany an'efitra.
Tena zava-dehibe ny varotra rehefa miely be loatra amin'ny fampahalalana ilay orinasa lehibe ary ilaina ny manatona ny mpanjifanao. Tsy misy vidiny mihitsy na dia izany aza ny fomba toy ny spam dia ataoko tsinontsinona…
Tamin'ny alàlan'ny bilaogy dia nahazo fomba vaovao hilazana ny marina ny vahoaka madinidinika ary sosotra ny olona mamaha ny heriny. Heveriko fa fambara fotsiny ny fiheveran'izy ireo fa fahamarinana hafa noho ny azy ireo dia diso tanteraka…
Hanana fifohazana sarotra izy ireo…
Dec 1, 2007 amin'ny 9: 14 AM
Misaotra tamin'ny teny tsara nataonao, Bengt! Tena nanjary fampitoviana lenta tokoa ny Internet.
Dec 1, 2007 ao amin'ny 2: PM PM
Toa ahy izany toa ny fanehoan-kevitr'i Christina momba ny “filalaovana” dia miresaka bebe kokoa amin'ireo izay mampiasa teknikan'ny satroka mainty. Basic fanatsarana ny bilaogy / tranokala dia zavatra tokony ho fantatry ny mpivarotra rehetra na miafara amin'ny fandaozany ny "lalao" amin'ny toerana misy anao… Mino aho fa izy io dia farafaharatsiny mba mamerina izany ary marina ny fananana ny atiny na hafa.
Raha ny fahaizan'i Google milahatra tsara amin'ny pejy… ampy tsara izy ireo, saingy nanao fikarohana aho izay tsy dia nifandray tamin'ny karoka ny lisitra ambony raha tsy ny teny lakile hita matetika ao anaty lahatsoratra.
Na dia azoko tsara aza ny zava-drehetra lazainao hoe Doug, dia te-hanao ny tsy rariny tamin'i Christina fotsiny aho -Ts heveriko fa izy tanteraka adala.
Dec 1, 2007 ao amin'ny 3: PM PM
Angamba izany no olana, William. Tsy manavaka ny tsirairay i Christina fa manangona ny tontolon'ny bilaogy iray manontolo fotsiny izy ary milaza fa izahay no olana fa tsy ny vahaolana.
Ity misy blurb hafa:
Betsaka ny resaka ao anatin'ny vondrom-piarahamonina teknolojia, indrindra ny tontolon'ny bilaogy momba ny fampiasana SEO sy ny fomba TSARA ho an'ny bilaogera ary tsy misy fiatraikany ratsy amin'ny mpamaky / mpikaroka / mpampiasa mahazatra. Lainga izany.
Tsy tsara amin'ny mpamaky sy mpikaroka ny SEO? Marina? Lainga daholo izany ary misy fiantraikany ratsy amin'ny valin'ny fikarohana ny bilaogy? Ny ankamaroan'ny fanampiana azoko dia avy amin'ny bilaogy, fa tsy tranokala brochure… fanampiana amin'ny fitadiavana mpivarotra, fampandrosoana, SEO, marketing, teknolojia… mahalana aho no mahita fitaovana tsara kokoa ivelan'ny tontolon'ny bilaogy.
Mino aho fa ny bilaogy dia mazàna misokatra kokoa, marina ary mandanjalanja kokoa noho ny tranokala orinasa. Izany no mahatonga ny olona mijery tsara azy ireo - ary mifanohitra amin'izany - avo lenta azy ireo i Google. Tsy tian'ny orinasa izany… raha ny tena izy dia ataony tsinontsinona satria mety hanery azy ireo hisokatra izany ary hanomboka hitoraka bilaogy ny tenany.
Hafa ny zavatra nieritreretan'ny media, mandondona ny tontolon'ny bilaogy hatrany ary manome tsiny ny loza manerantany amin'ny bilaogera. (Tahaka ny nanomezan'izy ireo tsiny ireo classifieds maty ao amin'ny eBay sy Craigslist). Farafaharatsiny mba nahira-tsaina koa ny Mass Media ary bilaogin'izy ireo izao!
Momba ny famatsiana sy ny fangatahana avokoa izany. Heveriko fa tsy nety i Christina satria mitaky an'ity karazana atiny ity ny olona. Tsy ny bilaogera no olana. Ny tsy fahalalana dia.
PS: Tsy mino aho fa 'adala' koa i Christina. Heveriko fotsiny fa tsy azony tsara ny toetran'ny fikarohana, ny fitondran-tena amin'ny Internet, ary ny fomba fampiasana azy io araka ny tokony ho izy. Mahafantatra olona betsaka toa an'i Christina aho!
Dec 3, 2007 ao amin'ny 9: PM PM
Toy ny zava-drehetra, misy tsipika tsara eo amin'ny tsara sy ny tsy dia tsara (ratsy). Ataoko fa miankina amin'ny tsirairay ny manao an'io fanavahana io, fa raha ny tontolon'ny bilaogy dia sarotra ny mahazo zavatra hitranga nefa tsy mampihatra paikady seo efa ela akory. Raha mamaky ny bilaogin'i Matt amin'ity ianao dia hitanao fa “tsy tokony hanao an'io na izatsy ianao fa raha ianao kosa dia…” - lol 🙂
Dec 4, 2007 ao amin'ny 2: PM PM
Ity dia toy ny “lalao” tokoa satria isika rehetra dia mila manasokajy ny filalaovana ny “catch-up” amin'ireo fironana farany… saingy izao no izy misy raharaham-barotra.